Lampard oo si xooso leh kaga hadlay kulanka ay Atletico Madrid ku wajahayaan Champions League – Gool FM
Lampard oo si xooso leh kaga hadlay kulanka ay Atletico Madrid ku wajahayaan Champions League
Dajiye December 15, 2020
(London) 15 Dis 2020. Tababaraha kooxda Chelsea ee Frank Lampard ayaa xaqiijiyay in kulanka Atletico Madrid ee tartanka UEFA Champions League uu noqon doono mid xiiso badan oo aad u adag.
Waxaa shalay la sameeyey isku aadka wareegga 16-ka ee tartanka UEFA Champions League, iyadoo kulammo adag ay ka soo bexeen, Barcelona ayaa lagu beegay PSG, halka kooxda reer England ee Chelsea ay ku aadday Atletico Madrid.
Haddaba wargeyska “AS” ee dalka Spain ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyayb tababare Frank Lampard, kaddib marka la sameeyay isku aadka wareegga 16-ka ee tartanka UEFA Champions League, wuxuuna yiri:
“Waxaan u maleynayaa in dadka intiisa badan ay dhihi doonaan in isku aadkii ugu adkaa uu ahaa kii aan ku beeganay, marka loo fiiriyo waxqabadka haatan ee kooxda ka ciyaarta horyaalka Spain, khibrada yurub, iyo tayada kooxda.”
“Laakiin dhamaan natiijooyinka isku aadka Champions League waa kuwo adag, waa inaan aaminaa nafteena marka waqtiga ciyaarta la gaaro.”
“Waa inaan ka adkaanaa kooxda noocaas ah hadii aad ku socoto wadadii aad ugu guuleysan laheyd Champions League.”
“Isku aadka kasta wuu adkaan lahaa, laakiin haddii aad eegto, waxay ku sugan yihiin meesha ugu sareysa ee Horyaalka Spain.”
“Waxaan arkay iyaga oo ka reebaya tartanka xilli ciyaareedkii hore Liverpool oo koox fiican ah, khibrad iyo tayo leh.”
Horudhac: Manchester City vs West Bromwich Albion (Miyuu ciyaari doonaa Sergio Aguero?)
Neymar oo fariin qaas ah u diray Messi ka hor kulanka ay ku wada ciyaarayaan Champions League